Coniferous osisi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Coniferous osisi
Osisi Krismas: mma mara mma nke aka gị
Kalịnda ji obi ike na-ebute akwụkwọ akụkọ akara "December", nke pụtara na afọ Ọhụrụ na-eru nso. Ihe na-atọ ọchị, njem ịzụ ahịa, atụmatụ na nrọ - anyị ji nwayọọ nwayọọ na-esonye na marathon a. Mana ihe kachasị mkpa bụ osisi Krismas, na-enweghị nke a ga-echetụ n'ememme a. Anyị na-amụta otú e si chọọ osisi a mma ka nzukọ nke afọ na-abịanụ nọgide na-echeta ihe na-egbuke egbuke.
Nkọwa nke osisi cedar na ụdị ha (na foto)
N'etiti ndị conifers ọ dịghị osisi ọ bụla dị ka cedar maka nkwekọrịta nke nhazi nke ugbo ubi. Nke a bụ ihe ọtụtụ n'ime ndị Bekee na-eche, nke na-akọwa n'ụzọ zuru ezu na ihe a na-ewu ewu nke ụdị osisi a na-enwe mgbe ọ bụla n'ubi ndị a na-arụ ọrụ ubi. Cedars abụọ ma ọ bụ atọ na-abanye n'ọnụ ụlọ ahụ zuru ezu iji wuo ihe owuwu ihe owuwu ụlọ, na-enye ya ihe mara mma ma n'otu oge ahụ ọchị.
Ụdị nke osisi Cypress
Ihe a na-emekarị maka ọdịiche anyị dị na mkpịsị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ya dị ka osisi fir, nke a na-akpọ ebe a mụrụ North America, agwaetiti Taiwan na Japan. Na mkpokọta, a na-amata ụdị osisi isii nke osisi a, n'ime nke ọ bụla a na-enyocha ọtụtụ osisi cypress. A na-eji osisi okpuru pyramidal na aja aja agba aja aja niile osisi nile nke ọdịdị a.
Serbian spruce: esi eto na gị ibé
Otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka ịme ụlọ okpomọkụ gị bụ Serbian spruce. Ọ na-adọta ndị na-azụ ahịa ọ bụghị nanị maka ọdịdị ya, kama ọ na-adọrọkwa maka oge ọ ga-agwụ, nakwa ka ọ dị mfe nlekọta. Ma, ọ bụ àgwà ọma ndị a ka ọ ga-eme ka ndị ọzọ niile nwee ike ịchọta ya? Nkọwa di nkenke nke Serbian spruce, onye aha ya bu picea omorika, na-anọchite anya ezinulo Bee.
Egwu na-efe efe na otú ha si eme ya
Kedu otu esi ahazi ije maka ọkụkọ? Kedu ihe ị ga - ahọrọ - ọhụụ, solarium mkpanaka ma ọ bụ pen na-enweghị ego?
Mgbụsị akwụkwọ utuchaa kwachaa n'ihi iwu niile
Ụdị nke rabbits: Vienna acha anụnụ anụnụ: atụmatụ nke ozuzu n'ụlọ
Tomato na aloe: gịnị kpatara o ji dị mkpa ka mkpụrụ osisi soak sie na ihe ọṅụṅụ nke osisi tupu akuku na otu esi eme ya?
Ụzọ dị mfe ma dị ngwa iji ifriizi dil maka oyi n'ime friji. Atụmatụ nchekwa